မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်များ အစည်းအရုံး၏ တန်ခူးရင်ခွင် သံချပ်အဖွဲ့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အိမ်ရှေ့တွင် သင်္ကြန်သံချပ်ဖြင့် ဧပြီလ ၇ရက် ညနေ ၄ နာရီမှ စတင်ကာ ဖျော်ဖြေ
မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်များ အစည်းအရုံး၏ တန်ခူးရင်ခွင် သံချပ်အဖွဲ့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အိမ်ရှေ့တွင် သင်္ကြန်သံချပ်ဖြင့် ဧပြီလ ၇ရက် ညနေ ၄ နာရီမှ စတင်ကာ ဖျော်ဖြေနေစဉ်။ (ဓာတ်ပုံ- ဟိန်းထက်)
မန္တလေး၊ ဧပြီ ၆
မန္တလေးမြို့ မဟာသင်္ကြန်ပွဲတော်အတွင်း ကျုံးဘေးပတ်လည်တွင် ရေကစားမဏ္ဍပ်တစ်ခု တည်ဆောက်ခွင့် ပါမစ်ကို တစ်ဆင့်ပြန်လည်ရောင်းချပါက ကျုံး တောင်ဘက်ခြမ်းတွင် ကျပ်သိန်းရာဂဏန်း ၀န်းကျင်အထိ ဈေးနှုန်းရှိနေကြောင်း သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရာတွင် မဲမပေါက်ခဲ့သော ပြင်ပမှဝယ်ယူလိုသူများ ထံမှ သိရသည်။
“သင်္ကြန်မဏ္ဍပ် မဲနှိုက်တာမပေါက်တဲ့ အတွက် ပြင်ပကနေ လက်လွှဲပြန်လည် ၀ယ်ယူဖို့အတွက် ဈေးစုံစမ်း တော့ ကျုံး တောင်ဘက်ခြမ်းမှာ ကျပ်သိန်း၈၀နဲ့ ၁၀၀ ကြား ဈေးနဲ့ ပြန်ရောင်းချင်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ ၀ယ်ယူတဲ့သူရှိပါတယ်။ ကျွန်တော် တို့ကတော့ မ၀ယ်ပါဘူး” ဟု ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ မန်နေဂျာတစ်ဦးက ပြောသည်။
ကျုံးဘေးပတ်လည်တွင် ကျုံးတောင် ဘက်ခြမ်း၌ မဏ္ဍပ် ၁၅ ခုသာ ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုထားသည်။ တည် ဆောက်လိုသည့် အရေအတွက်နှင့် ချထားပေးသည့် အရေ အတွက်မှာ ကိုက်ညီမှုမရှိသဖြင့် ယခုကဲ့သို့ ပြင်ပပေါက်ဈေးတစ်ရပ် ပေါ်ထွန်းလာခြင်း ဖြစ်သည်။
“သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်တည်ဆောက်ခွင့်အတွက် မဲစနစ်နဲ့ မြို့တော်စည်ပင်မှာ နှိုက် ပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ တချို့က မရလည်း အရင်း၊ ရလည်းအမြတ်ဆိုပြီး ၀င်နှိုက်တာ တွေ ပါပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ အခုလို ပြဿနာတွေ ဖြစ်လာတာပဲ။ စပေါ်ကြေးက ငါးသိန်း ပြင်ပရောင်းဈေးက သိန်း ၈၀ လောက်ရှိတော့ အမြတ်များများ ကျန်တဲ့အ တွက် အခုလိုလုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်”ဟု မဏ္ဍပ်တည်ဆောက်လိုသည့် လုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးဖြစ် သည့် ကိုနေသူက ပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့သော ပြဿနာများမဖြစ်ပွားစေရန် ရန်ကုန်တွင် ထိရောက်သော ဒဏ်ကြေးများ သတ်မှတ်ဆောင် ရွက် သော် လည်း မန်္တလေးတွင်မူ စစ်ဆေးမှုပိုင်းနှင့် ထိရောက်သော ဒဏ်ကြေးတပ်ရိုက်ခြင်းများ မရှိဟု ၎င်းတို့က ဆိုသည်။
အဆိုပါကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ အခွန်ဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ် ဦးက “ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ စည်းကမ်းချက်နဲ့မညီတဲ့ သူတွေကို စစ်ဆေးမှုတွေစနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ထဲမှာ စည်းကမ်းချက်နဲ့မညီတဲ့ မဏ္ဍပ်တွေကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ဒါတွေကို သတိပေးတာတွေ လုပ်နေ ပြီဖြစ်ပါတယ်။ မန္တလေးမြို့တွင်း တချို့မဏ္ဍပ်တွေဆိုရင် ဆောက်လုပ်ခွင့်မတင်ဘဲ ဆောက်နေတာတွေရှိ ပါတယ်။ အဲဒါတွေကိုလည်း စစ်ဆေးဆောင်ရွက်နေပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
မန္တလေးမြို့ သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်နေရာချ ထားရာတွင် ၂၀၁၄ခုနှစ်၌ မဏ္ဍပ် ၅၃ ခုအတွက် ငွေကျပ်သိန်းလေးရာ ကျော် ကောက်ခံရရှိထားသည်ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
မန္တလေးမြို့ ကျုံးဘေးပတ်လည်တွင် မဏ္ဍပ်ပေါင်း ကနဦးတွင် ၃၄ ခု၊ လက်ရှိ၌ ၃၆ခုအထိ ရှိနေပြီဖြစ်ရာ မြို့တွင်းတွင် အလှပြမဏ္ဍပ်တစ်ခု၊ ရေကစားမဏ္ဍပ် ၉ခုနှင့် ကန်တော်ကြီး၌ ရေကစားမဏ္ဍပ်ခုနစ်ခု လက်ရှိ တည်ဆောက်နေပြီဖြစ်သည်။
မန္တလေးကျုံးလေးဘက်တွင် တောင် ဘက်ကျုံးမှာ မဏ္ဍပ်အများဆုံးနှင့် နှစ်စဉ် အစည်ကားဆုံးဖြစ်သည်။ ဒုတိယအ စည်ကားဆုံးမှာ အရှေ့ကျုံးဖြစ်ပြီး ကျန်အ နောက်နှင့် မြောက်ဘက်တို့မှာ မဏ္ဍပ်နည်း ပါးပြီး ရေစုပ်စက်၊ မီးသတ်ပိုက်များဖြင့် ရေကစားမှုများသာ များပြားသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် ကျင်းပမည့် ဒုတိယအကြိမ် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ၌ အင်န်အယ်လ်ဒီနှင့် ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီကြီး နှစ်ခုတို့၏ အဓိကပြိုင်ဘက်မှာ ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားပါတီများဖြစ်ကြောင်း ရှမ်း တိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီနှင့် ရခိုင်အမျိုးသားပါတီတို့က ပြောသည်။
“ပြည်နယ်တွေနဲ့ တိုင်းဒေသကြီးတွေ မှာ ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ နိုင်ငံရေးနိုးကြားမှုတွေက ကိုယ့်ဒေသ ကိုယ်တည်ဆောက်မှ ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ ပိုခိုင်မာလာတယ်။ ဒီတော့ ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းဒေသကြီး တွေမှာ အခြေစိုက်တဲ့ တိုင်းရင်းသားပါတီ တွေဟာ အင်အားကြီးပါတီ နှစ်ခုအတွက်တော့ အဓိက ပြိုင် ဘက်တွေ ဖြစ်လာမယ်” ဟု ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ၏ ဒုတိယခေါင်း ဆောင်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ် ဒေါက်တာအေးမောင်က ပြောသည်။
“တိုင်းရင်းသားပါတီတွေ အာဏာရမှသာ ဒေသအကျိုးကို စွမ်းဆောင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆတွေ အားပို ကောင်းလာတယ်။ လက်ရှိမှာ ဥပမာပြရရင် ကိုယ့်ဒေသထွက်တဲ့ စွမ်းအင်(လျှပ်စစ်)ကို ရန်ကုန်ကိုယူသွား ပြီး ပြည်မမှာ တစ်ယူနစ် ကို ၃၅ ကျပ်လောက်နဲ့ သုံးနေကြချိန်မှာ အဲဒီစွမ်းအင်ထွက်ခဲ့တဲ့ ဒေသခံတွေက ၅၀၀ ကျပ်လောက်ပေးကြရတယ်။ ရခိုင်က ဓာတ်ငွေ့တွေ၊ ကယားပြည်နယ်၊ လောပိတ ရေအားလျှပ်စစ် တွေ တခြား မနျသကမခနျ တွေလဲ အလားတူပဲ။ အခုဆိုရင် ဗန်းမော်မှာလဲ ရှမ်းနီပါတီပေါ်လာပြီ။ ကိုယ့် ဒေသ အကျိုးစီးပွား ကိုယ်ဖန်တီးနိုင်ဖို့ အခုလို တိုင်းရင်းသား ပါတီတွေပေါ်လာတာပဲ”ဟုလည်း ၎င်းက ရှင်းပြခဲ့သည်။
ကိုယ့်ဒေသ ကိုယ်ဖန်တီးမှဖြစ်တော့ မည်ဟူသည့် အတွေ့အကြုံကို အခြေခံသော ယုံကြည်နားလည်မှုများ ကြောင့်လာမည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲသာမက ၂၀၁၅ အတွက်ပါ အင်န်အယ်လ်ဒီနှင့်ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ တို့ကိုကောင်းစွာ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကျားဖြူပါတီ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုင်းဆောင်ဆီက ပြောသည်။
“လာမယ့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲက တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ လစ်လပ်ကိုယ်စားလှယ် ၁၄ နေရာ ရှိတော့ ပွဲကကြည့်ကောင်းမှာပါ။ ရှမ်းနဲ့ ရခိုင် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အခြေအနေကောင်းခဲ့သလို ၂၀၁၀ မှာလဲကောင်းခဲ့တယ်။ ၂၀၁၂ ကြား ဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာလဲ ရှမ်းကအခြေအနေကောင်းခဲ့တာပဲ။ လွှတ် တော်သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာ ဒေသအကျိုး အတွက် ထဲထဲဝင်ဝင်အလုပ်လုပ်ခဲ့လို့ ပြည်သူတွေက ကျွန်တော်တို့ပါတီကို မိဘတွေလို သဘောထားလာကြလို့ အခြေအနေ ကောင်းပါတယ်” ဟု ၎င်းက ရှင်းပြသည်။
၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် လစ်လပ်မဲဆန္ဒနယ် ၄၅ နေရာအနက် အင်န်အယ်လ်ဒီက ၄၃ နေရာ တွင် အနိုင်ရခဲ့သော်လည်း ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက် ပိုင်း)၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်တစ်နေရာတွင်မူ ကျားဖြူ ပါတီမှ ဦးစိုင်းစံမင်းက ပါတီကြီးနှစ်ပါတီကို ကျော်ဖြတ်အနိုင်ရခဲ့သည် ကိုရည်ညွှန်း၍ ပြောဆိုခြင်းဖြစ် သည်။
ကျားဖြူပါတီသည် ရှမ်းပြည်နယ်တွင် တန့်ယန်း၊ မိုးကောင်း၊ တာချီလိတ်နှင့် နမ့် ခမ်းမြို့နယ်များတွင် ၀င် ရောက်ယှဉ်ပြိုင် မည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါလေးနေရာအတွက် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ အရှေ့ပိုင်းနှင့် တောင် ပိုင်းရှိ ကျားဖြူပါတီဝင်များ စုပေါင်း အားဖြည့်ကာ ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ရှမ်းပြည်နယ်၌ လစ်လပ်ကိုယ်စားလှယ်လေးဦးအတွက် လေးနေရာ၊ ရခိုင် နှင့် ကချင်ပြည်နယ်တို့တွင် သုံးနေရာစီ၊ တနင်္သာရီ၊ ချင်းနှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့တွင် တစ်နေရာစီ စုစုပေါင်း ၁၄ နေရာ လစ်လပ်လျက် ရှိပြီး ဒေသခံအများစုသည် တိုင်းရင်းသားပါတီများကိုသာ ရွေးချယ်ကြမည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်းလည်း ကျောက်မဲမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းဆောင်ဆီက ပြောသည်။“ဒီပါတီကြီးတွေမှာ မဟာဗျူဟာရှိ ရမယ်။ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့ ဘယ် လောက်ထိ လက်တွဲမလဲဆိုတာ ကြေညာပေးသင့် ပြီ။ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ မပြိုင်ခင် မဟာမိတ်လုပ်မလား။ ပြိုင်ပြီးမှ လုပ်မှာလား စဉ်းစားရတော့မယ်”ဟု လည်း ဒေါက်တာ အေးမောင်က ရှင်းပြသည်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD)၏ နာယက သတင်းစာဆရာကြီး ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင်၏ ကျန်းမာ ရေးအခြေအနေမှာ ကောင်းမွန်လာကြောင်း ၎င်းနှင့်နီးစပ်သူ မိတ်ဆွေများက ဧပြီလ ၆ ရက် ည ၇ နာရီ ကျော်တွင် မဇ္ဈိမကို အတည်ပြု ပြောကြားသည်။
ဦးဝင်းတင်၏ မိတ်ဆွေတစ်ဦးဖြစ်သူ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်း ဦးထွန်းကြည်က “တော်တော်လေး ကောင်းလာပါပြီ။ တဖြည်းဖြည်း တိုးတက်လာပါတယ်။ အရင်ကထက်စာရင် တိုးတက်လာတယ် ပြောရ မယ်။ ဒီလိုရောဂါမျိုးတွေကတော့ တစ်မုဟုတ်ချင်း ပျောက်သွားတာတော့ မရှိပါဘူး။ ဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန် တိုးတက်လာတယ်”ဟု ဆိုသည်။
ဒီလှိုင်းဂျာနယ် အမှုဆောင်အယ်ဒီတာ မုံရွာအောင်ရှင်ကလည်း “တော်တော်ကောင်းသွားပါပြီ။ အခြေအနေ တိုးတက်လာပါတယ်”ဟုဆိုသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် ဦးဝင်းတင်ကို နိုင်ငံခြားသို့ သွားရောက်ဆေးကုသရန် အစီအစဉ်မရှိသေးဟုလည်း ဦးထွန်း ကြည်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ဦးဝင်းတင်၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ကောင်းမွန်လာစေရန်အတွက်ဆုတောင်းပွဲများကို ရန်ကုန်အပါအ၀င် မန္တလေးမြို့ကြီးများတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
၇.၄.၂၀၁၄ ရက်နေ့ ၀၇၁၀ အချိန်တွင် မြောက်ဥက္ကလာပ မြို့ရဲစခန်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ပုရွက်ဆိတ်ကုန်း ဘူတာအနီး၊ မိုင်တိုင်အမှတ်(၂၃/၂၄)ကြားတွင် ကိုရင်တစ်ပါး ရထား တိုက်ခံရ၍ ပျံလွန်တော်မူကြောင်း သတင်းအရ သွားရောက် စစ်ဆေးခဲ့ရာ သေဆုံးသူမှာ ပုရွက်ဆိတ်ကုန်း ရပ်ကွက်ရှိ ဝေနေယျသုခ ကျောင်းတိုက်တွင် ၄.၄.၂၀၁၄ ရက်နေ့မှ စတင်၍ ကိုရင်ဝတ်ခဲ့သည့် ကိုရင်အိန္ဒက(ခ)အောင်မင်းထိုက်၊ (၂၉)နှစ်၊ (ဘ)ဦးထွန်းဝင်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပ မြို့နယ်နေသူဖြစ်ပြီး ဦးခေါင်းပြတ်လျက် ပျံလွန်တော်မူနေသည်ကို တွေ့ရှိ ရပါသည်။
ထိုသို့စစ်ဆေးခဲ့ရာ ကိုရင် အိန္ဒက(ခ)အောင်မင်းထိုက်သည် ၀၆၁၀အချိန်ခန့်တွင် အခင်းဖြစ်နေရာ၌ ရထားလမ်းအားဖြတ်ကူးစဉ် မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ဘက်မှ ရန်ကုန်မြို့တွင်းသို့ မောင်းနှင်လာသော စက်ခေါင်းအမှတ် DF-1243 မြို့ပတ်ရထားမှ တိုက်မိကာ ကြိတ်မိခဲ့သဖြင့် ပျံလွန်တော်မူခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ မြောက်ဥက္ကလာပ မြို့မရဲစခန်းသေမှုသေခင်း အမှတ်စဉ် (၈/၂၀၁၄) ဖြင့် ရေးဖွင့်ကာ စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
မိန်းကလေးများရဲ့ စကပ်အောက်ကို ဖုန်းနဲ့ ဗီဒီယိုခိုးရိုက်သူ ထောင်ကျ
အသက် ၂၆နှစ်ရှိ Dominic Chia Hooi Chuan ဆိုသူမှာ RWS မှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူ တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများစွာကို ဗွီဒီယိုရိုက်ကူးမှုပေါင်း ၉ကြိမ်နျှင့် သူနေထိုင်ရာ Elias လမ်းမှ နေအိမ်မှာရှိတဲ့ လက်ကိုင်ဖုန်းတွင်လည်း အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ မဖွယ်မရာ ပုံရိပ်များကို ဗွီဒီယို ရိုက်ကူးထားမှုတို့ကြောင့် ယခုလို ထောင်ဒဏ် သတ်မှတ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ Straits Times သတင်းစာအရ သိရပါတယ်။
ပြည်ထောင် စုလွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်း
ရန်ကုန်၊ ဧပြီ ၆- ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအပါအဝင် မြန်မာ နိုင်ငံ တွင် ကြုံတွေ့ရလာ ဖွယ်ရှိသည့်နိုင် ငံရေး အကျပ်အတည်းများကိုကျော် လွှားနိုင်ရန် အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ အ တွင်း သြဇာတိက္ကမကြီးမားသူများအ ကြား တွေ့ဆုံဆွေးနွေး မှု ပြုလုပ်နိုင် ရန် အရေးကြီးကြောင်း ပြည်ထောင် စုလွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်း က ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။
ဧပြီ ၆ရက် နံနက်ပိုင်းက ပြည် ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက သူရ ဦး ရွှေမန်းနှင့် ဒီမို ကရေစီတူဒေးတို့၏ သီးသန့်တွေ့ဆုံမေးမြန်း မှုတွင် အခြေ ခံဥပဒေပုဒ်မ ၅၉(စ) ပြင် ဆင်ရေးနှင့် ပတ်သက် ပြီးမေးမြန်း မှု အ ပေါ်ပြန် လည်ဖြေ ကြားရာတွင် ယင်းကဲ့ သို့ ပြောကြား လိုက်ခြင်းဖြစ် သည်။
““ပုဒ်မ ၅၉(စ)က ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်နဲ့တင်မကဘူး။ အားလုံး နဲ့ဆိုင်တယ်။ တစ်ဖက်မှာလဲ ဖွဲ့စည်း ပုံမပြင်လဲ အင်န်အယ်လ်ဒီ ကရွေး ကောက်ပွဲဝင်မယ် ပြောထားတယ်။ ဒါကလဲကောင်းတဲ့အချက်ပဲ။ ဖွဲ့စည်း ပုံပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ အကျပ် အတည်းကြုံမှာကို စိုးရိမ်ပူပန်သူတွေလဲ ရှိတယ်။ နိုင်ငံရေးကတော့ ဆက်ပြီး သွားရမှာပဲ။ အကျပ်အတည်းက ကြုံ ကောင်းလဲ ကြုံနိုင်တယ်။ အခက်အခဲ တွေကိုကျော်လွှားရလိမ့်မယ်။ ကျော် လွှားနိုင်အောင်မ လုပ်တဲ့သူတွေ က ပြု ပြင်ပြောင်းလဲရေး မလုပ်တဲ့သူတွေ။ ဒါကြောင့် ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးအပါ အဝင် နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးအတွက် သြဇာကြီးမားသူတွေ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး နိုင်ဖို့ သိပ်ကိုအရေးကြီးတယ်””ဟု သူရ ဦးရွှေမန်းက ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံရေးအရ သြဇာကြီးမားသူများဖြစ် သည့် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၊ ကာကွယ်ရေးဦး စီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်၊ လွှတ်တော်နာယက သူရ ဦးရွှေမန်းတို့နှင့် လေးပွင့်ဆိုင်ဆွေး နွေးခွင့်ရရန် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအ ဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဌဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က တောင်းဆိုထား သည်။
ယင်းကဲ့သို့ ထုတ်ဖော်ပြောကြား မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ““ပြောပုံအရတော့ လေးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲကို အဓိက ပြောပုံ ရတယ် ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့က တောင်းထားတယ်ဆိုတော့ နီး စပ်မှုရှိ ကြောင်း ပြတာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်”” ဟု မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလေ့ လာသူ ကို ကျော် လင်းဦးက သုံးသပ်ပြောကြားသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေ ဖြင့် မြန်မာ့တပ်မတော်ကို ဒီမိုကရက် တစ်နည်းကျ တပ်မတော်အဖြစ်ရှိရန် လိုလားပြီး ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပါ သူမ၏ သမ္မတဖြစ်ခွင့်ကို ကန့်သတ် ထားသည့် ပုဒ်မ၅၉ (စ) နှင့် ပုဒ်မ-၄၃၆ ကဲ့သို့သောပုဒ်မ မျိုးအထိ ပြင် ဆင်ပေး ရန် တောင်းဆိုထားကြောင်း သိရသည်။
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင် ခြင်း ပုဒ်မ-၄၃၆အရ ဖွဲ့စည်းပုံပြင် ဆင်ပါက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၇၅ရာခိုင်နှုန်းအပါအဝင် တပ်မတော် သားကိုယ်စားလှယ် အနည်းဆုံးတစ် ဦးက ပြင်ဆင် ရေး ကိုထောက်ခံမှသာ ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြင်နိုင် မည်ဖြစ်သဖြင့် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူအများစုက ယင်း ပုဒ်မကိုပြင်ဆင်ရန် လက်ရှိအချိန်တွင် တောင်းဆိုနေကြောင်း သိရသည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယ က သူရဦးရွှေမန်းအနေဖြင့် လွှတ် တော်တွင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်နိုင်ရေးအတွက် ဖွဲ့စည်းပုံအ ခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ခြင်း အကောင် အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ ကို ဖွဲ့စည်း ပေးထားသလို ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ ခြောက်လအတွင်း အပြီးသတ် ပြင်ဆင်နိုင်ရန် အဆိုပါကော်မတီကို လမ်းညွှန်မှုပေးထားကြောင်း သိရသည်။
လေ့လာသုံးသပ်သူများ၏အဆိုအရ အစိုးရနှင့် တပ်မတော်ကာကွယ် ရေးဦးစီးချုပ်တို့အနေဖြင့် ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ရာတွင် တပ်မတော်၏ အခန်း ကဏ္ဍဍကိုမလျှော့ချဘဲ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေပြင် ဆင်ခြင်း အခန်း(၁၂) ပုဒ်မ -၄၃၆ပါ ပြဋ္ဌဌာန်း ချက်များဖြင့်သာ ပြင် ဆင်လိုနေသည်ဟု သုံးသပ်ကြသည်။ ယင်းအပြင် တပ်မတော်အနေဖြင့် အစိုး ရမှ အကောင် ထည်ဖော်နေသည့် ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ အတွက်လည်း အာမခံပေးထားပြီး အစိုးရနှင့် တိုင်းရင်းသားများ အပါ ဝင် အားလုံးပါဝင်သည့် နိုင်ငံရေးဆွေး နွေးပွဲကျင်းပမည့် အစိုးရ၏ အစီအစဉ် အား ထောက် ခံမှုပေး ထားပုံရသည်ဟု နိုင် ငံရေးလေ့ လာသူများက ပြောသည်။
““သမ္မတနဲ့ ကာကွယ်ရေးဦးစီး ချုပ်တို့က ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေးထက် တိုင်း ရင်းသား ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စကို အလေး ပေးနေ တာတွေရ တယ်၊ ဒီလေးယောက် တည်းနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအပါဝင် နိုင်ငံရေး ပြသနာတွေ ဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ ယုံ ကြည်ထားပုံ မရဘူး ၊ အားလုံး ပါဝင် တဲ့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသာ နိုင်ငံရေး ပြသနာတွေကို အဖြေရှာနိုင်မယ် လို့ ယူဆပုံရတယ်”ဟု ကိုကျော်လင်း ဦးက ပြောသည်။
မေသော် on 2014-04-05 14:05 Tweet
၁။အိပ်ချိန်တွေကို မလျှော့ပစ်ပါနဲ့။ ဒါဟာ လူတစ်ယောက်အတွက် သိပ်အရေးကြီးတဲ့အရာပါ။ အိပ်ချိန်အပြည့်အ၀ ရှိပါစေ။
၂။ပွေ့ဖက်ခြင်းဟာလည်း သင်ခံစားနေရတဲ့ ဖိအားတစ်ချို့ကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ ရယ်မောခြင်းနဲ့ ပွေ့ဖက်ခြင်းအတွက် မတွန့်ဆုတ်ပါနဲ့။
၃။ကိုယ့်အပေါ်ကောင်းတဲ့သူတွေကို ကျေးဇူးတင်စကားပြောပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် note လေးရေးပြီး ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်း သူတို့သိအောင် ပို့ပေးပါ။
၄။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ချီးမွမ်းတတ်ပါစေ။ အခက်အခဲတစ်ခုအတွက် ကိုယ်ရုန်းကန်ကြိုးစားခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေ၊ ကိုယ်ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့တဲ့ အခြေအနေတွေကို ပြန်သုံးသပ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုတိုးမြှင့်လိုက်ပါ။
၅။လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အကသင်တန်းတက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု တစ်ခုခု လုပ်တာကလည်း ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုပါပဲ။
၆။ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် သီချင်းတွေချည်း ရွေးပြီး နားထောင်ဖြစ်အောင် နားထောင်ပါ။
၇။ရေများများသောက်ပါ။ ဒါကလည်း နေ့စဉ်ဘ၀မှာ ကိုယ့်ကိုကျန်းမာအောင်၊ ပျော်ရွှင်အောင် ပံပိုးပေးနိုင်တယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။
၈။သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တစ်ပတ်ကို တစ်ခါ အနည်းဆုံး တွေ့ပေးပါ။ ရယ်စရာမောစရာတွေကြောင့် သင့်စိတ်တွေ ပြန်လည် လန်းဆန်းလာမှာပါ။
Telenor က ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖုန်းခေါ်ဆိုစမ်းသပ်မှုအောင်မြင်မှုရ
Telenor မှ ရန်ကုန်မြို့နှင့် ၂၂ကီလိုမီတာ ကွာဝေးသော စက်မှုဇုန်နေရာတစ်ခုတွင် Data Centre အားတည်ဆောက်လိုက်ပြီး ပထမဆုံးအကြိမ် ဖုန်းခေါ်ဆိုစမ်းသပ်မှု၊ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုနှင့်ဒေတာအသုံးပြုမှုတို့ကို စတင်သရုပ်ပြခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
Telenor က ယခုစမ်းသပ်မှုတွင် 3G network စနစ်ကိုဖြင့်အသုံးပြုပြီး Huawei စမတ်ဖုန်းအသုံးပြုကာ စမ်းသပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တယ်လီနော၏ data centre မှ ရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့နယ်တွင်းတည်ရှိသော တယ်လီနောမြန်မာ၏ ရုံးချုပ်သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုသည် တယ်လီနော၏ 3G ကွန်ယက်ပေါ်မှ ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး အသံဖြင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအပြင် ဗွီဒီယိုဖြင့်ခေါ်ဆိုမှုကိုလည်း ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုသိရသည်။
အဆိုပါဒေတာစင်တာအားသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော ကွန်တိန်နာများဖြင့် တယ်လီနော်နှင့် Huawei ကုမ္ပဏီတို့မှ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ရွေ့ပြောင်းရလွယ်ကူသောဒေတာစင်တာကို တီထွင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး တာဝါတိုင်တစ်ခုကိုပါ တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းဒေတာစင်တာ ထားရှိသည့် နေရာကို လက်ရှိတွင်နေရာအတိအကျကိုထုတ်ပြောကြားခြင်းမခြင်းမပြုနိုင်သေးကြောင်း တယ်လီနော်၏စီအီးအို Petter Furberg ကပြောကြားသည်။
ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိပြီး ၂လတာကာလအတွင်းဒေတာစင်တာကိုတည်ဆောက်နိုင်ခြင်းမှာ တယ်လီနော် ကုမ္ပဏီ၏ သက်တမ်းကာလအတွင်း အမြန်ဆုံးဒေတာစင်တာတည်ဆောက်မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
လိုင်စင်ရပြီး ၈လအတွင်း မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများကို ပြည်သူများလက်အတွင်းသို့အရောက်ပို့ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည့်အတွက် တယ်လီနော်ဆင်းကဒ်များစတင်အသုံးပြုချိန်တွင် မိုဘိုင်းဆားဗစ်ဝန်ဆောင်မှုအားလုံးကို ၁၅၀၀ ကျပ်ဖြင့်အသုံးပြနိုင်မည်ဖြစ်သည်။(Voice Mail/MMS/Internet etc.)
မိုဘိုင်းဆင်းကဒ်များကို အကန့်အသတ်မရှိဖြန့်ဝေသွားမည်ဖြစ်ပြီး အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုတွင် တာဝါနှင့်အဝေးဆုံးနေရာတွင် 1MB အထိအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ရန်ကုန်တွင်သာမက မန္တလေးမြို့တွင်ပါ ဒေတာစင်တာကို တည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ယခုလအတွင်းအပြီး သတ်တည်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။
တယ်လီနော်၏ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ ကွန်ယက်ဖြန့်ကျက်မှုကို ထောက်ပံ့ပေးမည့် core network ကို တည်ဆောက်ပေးသူမှာ Huawei ဖြစ်သည်။အခြားကွန်ယက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ပေးသူမှာ Ericsson နှင့်အိန္ဒိယ အခြေစိုက် Wipro တို့ဖြစ်ပြီး ဆက်သွယ်ရေးအခြေခံ အဆောက်အအုံ ဖြစ်သော ဆက်သွယ်ရေးတာဝါ များကို တည်ဆောက်၍ စီမံခန့်ခွဲ သူများမှာ Apollo Towers နှင့် Irrawaddy Green Technology(IGT)တို့ဖြစ်သည်။
ဒေတာစင်တာများတည်ဆောက်ပြီးသည်နှင့် နက်ဝေါ့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော Base Station များကိုလည်းဆက်လက်တည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း စီးအီးအို ပီတာက ပြောကြားခဲ့သည်။
သဲသဲထွေး ဘာသာပြန်သည်။ | Friday, 04 April 2014
ကင်ညာဘာသာရေးဆရာ မာကာဘူရီ (ခေါ်) အဘူဘာကာ ရှရဖ်-အာ-မက်။ အေအက်ဖ်ပီကင်ညာဘာသာရေးဆရာ မာကာဘူရီ (ခေါ်) အဘူဘာကာ ရှရဖ်-အာ-မက်။ အေအက်ဖ်ပီ
မွမ်ဘာဆာ (ကင်ညာ) - အယူဝါဒကို တရားသေ စွဲကိုင်ထားသူအဖြစ် ထင်ရှားသည့်
ကင်ညာမှ ဘာသာရေးဆရာတစ်ဦးသည် ဧပြီ ၁ ရက်တွင် မွမ်ဘာဆာ၌ သေနတ်ပစ်ခံရပြီး
အရှေ့အာဖရိကသို့ အဓိက ၀င်ရောက်ရာ နေရာဖြစ်ပြီး မဟာဗျူဟာကျသည့် ဆိပ်ကမ်း
မြိုကတော်အတွင်း ဘာသာရေးအရတင်းမာမှုများ ပိုဆိုးလာသည့်အချိန်တွင် ယင်းသို့ဖြစ်ပွားခဲ့
မာကာဘူရီအဖြစ်လူသိများသည့် အဘူဘာ ကာ ရှရဖ်အာမက်သည် အိုစမာဘင်လာဒင်ထောက်
ခံသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ယမန်နှစ်ကဖြစ်ပွား ခဲ့သော နိုင်ရိုဘီရှိ ၀က်စ်ဂိတ် ကုန်တိုက် တိုက်ခိုက်မှုကို
ရာနှုန်းပြည့်တရားသော လုပ်ရပ်ဟု ထောက်ခံခဲ့သူဖြစ်သည်။
ထိုတိုက်ခိုက်မှုမှာ အယ်လ်ကေဒါနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိသော ရှိဘက် သူပုန်များက ၎င်းတို့
လက်ချက်ဟုဆိုသည်။ မာကာဘူရီသည် ကုလသမဂ္ဂက အရေးယူမှုပြုလုပ်ထားသည့်စာရင်းတွင်
ပါဝင်သူဖြစ်ပြီး ဆိုမာလီတွင် အကြမ်းဖက် စစ်သွေးကြွလုပ်ရပ် များပြုလုပ်ရန် ကင်ညာ မွတ်စလင်
လူငယ်များ ကို ဦးဆောင်စည်းရုံးသူ၊ ရှိဘက်သူပုန်ခေါင်းဆောင်တို့နှင့် ခိုင်မာသည့် ပေါင်းစည်းမှုရှိ
သူဟု စွပ်စွဲခံနေရသူဖြစ်သည်။ သွေးအိုင်ထဲတွင် လဲကျနေသော မာကာဘူရီ ၏အလောင်းကို
အေအက်ဖ်ပီ သတင်းထောက် တစ်ဦးက မြို့ထဲတွင် တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်း သည် မည်သူမည်ဝါ
မှန်းမသိသူ၏ သတ်ဖြတ် ခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်ဟု မွမ်ဘာဆာမှ အကြီးတန်း ရဲအရာရှိ ရစ်ချတ်
အင်န်ဂါတီယာက အတည်ပြု ပြောကြားခဲ့သည်။
မွတ်စလင်အများစု နေထိုင် ရာ ကမ်းရိုးတန်းဒေသနှင့် မွမ်ဘာဆာရှိ အစွန်းရောက် အစ္စလမ္မစ်
များသည် ကင်ညာ အာဏာပိုင်များ၏ တန်းစီ သုတ်သင်ခြင်းကို ခံနေရသည်ဟု ဘာသာရေး
ဆရာတို့ကို ထောက်ပံ့ ပေးနေသူများက စွပ်စွဲပြောဆိုရာ တာဝန်ရှိသူ များက ထပ်တလဲလဲငြင်း
၀တ်ရုံအဖြူဝတ်ဆင်ထားသည့် မာကာဘူရီ သည် ရင်ဘတ်ကို ထိမှန်ခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ဘေး
တွင် အခြားလူငယ်တစ်ဦး သေဆုံးနေသည်ကို လည်းတွေ့ရသည်။
"ဖြတ်သွားတဲ့ ကားထဲကနေပစ်ခတ်ခံရချိန် မှာ သူတို့တွေကိုလာခေါ်မယ့်သူကို စောင့်နေ ခဲ့တာ။
သူတို့ကို ဘယ်သူကဘာကြောင့်သတ်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့လည်း မသိဘူး။ ကျွန်တော်တို့
ဘက်ကတော့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာပါ" ဟု ၎င်းရဲအရာရှိက
အလောင်းများကိုသယ်သွားခဲ့သော ရဲစခန်း အပြင်ဘက်တွင် ဘာသာရေးဆရာများကို
ထောက်ခံသူ ဒေါသတကြီးဖြစ်နေသည့် လူအုပ် ကြီးရှိနေပြီး ၎င်းတို့ နောက်ဆုတ်သွားစေရန်
ရဲများက သေနတ်များ မိုးပေါ်ထောင်ပစ်ခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်လက အေအက်ဖ်ပီနှင့်ပြုလုပ်ခဲ့
သော တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွင် မာကာဘူရီက ရန်သူ့လက်ချက်ဖြင့် သူ့ဘ၀နိဂုံးချုပ်မှာဖြစ်
ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး " ကျွန်တော့်ဘ၀က အန္တရာယ်တွေ ၀ိုင်းဝိုင်းလည်နေတဲ့ ဘ၀ပါ။
နောက်ဆုံးကျရင် သူတို့က ကျွန်တော့်ကို လာသတ်လိမ့်မယ်။ ဟုတ်တယ်၊ သူတို့ ကျွန်တော့်
ကို လာသတ်မှာပါ" ဟု ဆိုသည်။
အသက် ၅၀ ကျော်ပြီဖြစ်သည့် ၎င်းဘာသာရေး ဆရာသည် စက်တင်ဘာလအတွင်းက
လူ ၆၇ ဦး ထက်မနည်း သေဆုံးခဲ့သော အစ္စရေးတို့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပိုင်သည့် ၀က်စ်ဂိတ်
ကုန်တိုက် ကို ဖျက်ဆီးခဲ့သော ကွန်မန်ဒို တပ်ဖွဲ့များကို ချီးကျူး ခဲ့သူဖြစ်သည်။
"ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အပြစ်ကင်းတဲ့ လူသားတွေ အတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အပြစ်မဲ့တပ်သားတွေ က
အသက်ပေးသွားတာပါ။ ဒါဟာ တရားမျှတမှုရှိပါတယ်။ ကိုရမ်ကျမ်းအရရော၊ အစ္စလာမ်ဘာသာ
ရေးအရပါ ဒီ ၀က်စ်ဂိတ် တိုက်ခိုက်မှုက ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းမျှတပါတယ်" ဟု မာကာဘူရီက
မာကာဘူရီ အသတ်ခံရမှုသည် မွမ်ဘာဆာ အနီးရှိ ခရစ်ယာန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွင်
၀တ်ပြုသူခြောက်ဦး ပစ်သတ်ခံရပြီးနောက်တစ်ပတ်အကြာတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်းပစ်ခတ်မှုကို ကင်ညာ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များ က အချိန်မဆိုင်းဘဲ ချေမှုန်းခဲ့သည်။ ထို့ နောက်
အစ္စလမ္မစ်တို့၏ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ ကိုဖြေရှင်းရန် အပြတ်ရှင်းမူဝါဒ လက်ကိုင်ထား
သည့် တာဝန်ရှိသူများနျင့် ထပ်မံဆွေးနွေးရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေကြီး ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်း ဆုံရှမ်းကျေးရွာနှင့်မဆယ်ဆိမ့််တံတားအနီးတွင် လုယက်မှုတစ်ခုဖြစ် ပွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ၃.၄.၂၀၁၄ခုနှစ် ညနေ(၁း၄၅)အချိန်ခန့်တွင် ဝင်းဇော်(၂၂)နှစ်(ဘ)ဦးကျော်သန်းဌေး(ဈေးရောင်း)သည် ဗညာဒလလမ်း၊လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင်နေထိုင်သူသည် ဆုံရှမ်းကျေးရွာမှ မုန့်ပို့ပြီး၊ LOVE BO(110)အနက်ရောင် နံပါတ်(မပါ) ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ပြန်လာစဉ် ဆုံရှမ်းကျွေးရွာနှင့်မဆယ်ဆိမ့်ကျေးရွာကြား ထီးလုပ်လမ်း တံတား(အနီး) ဝါးတော အစပ်တွင် အပေါ့သွားရန် ဆိုင်ကယ်ပေါ်မှဆင်းရာ အမည်မသိလူတစ်ဦးသည် ပုဆိုးခေါင်းမြီးချုံ၍ မျက်နှာအား စီးထားကာ ဝါးခုတ်သော ဓားတစ်လက်ကို ကိုင်ဆောင်၍ ရောက်ရှိလာပြီး၊ အဆိုပါ မုန့်ပို့ကာ ပြန်လာသော ဝင်းဇော်လွယ်ထားသော လွယ်အိပ်အား လုယက်ထွက်ပြေးရာ ဝင်းဇော်က အနောက်မှနေပြီး လိုက်သောကြောင့် တရားခံမှ အသင့်ပါလာသော ဝါးခုတ်ဓားဖြင့် ဝင်းဇော်၏ ဝဲဘက်နားရွက်အောက်(၁)လက်မခန့် ပြတ်ရှဒဏ်ရာတစ်ချက်နှင့်ဝဲဘက် လက်မောင်း(၁) လက်မခန့် ပြတ်ရှဒဏ်ရာတစ်ချက်တို့ဖြစ် ဒဏ်ရာများစွာရရှိပြီး၊ဝင်းဇော်လွယ်ထားသော လွယ်အိတ်အတွင်းပါ ငွေကျပ်တစ်သိန်းသုံးသောင်းတိတိနှင့်လက်ကိုင်ဖုန်း ဆင်းကဒ်ပါ (HUWAI)အမျိုးအစား အနတ်ရောင်ဖုန်းတစ်လုံးပါရှိ သွားကြောင်း ဝင်းဇော်က ကျိုက်ထော်မြို့မရဲစခန်းသို့ အမှုဖွင့်တိုင်းကြားရာ အမည်မသိလူတစ်ဦး မျက်နှာဖုံးစွပ်အား (ပ/၂၁/၁၄)ပြစ်မှုပုဒ်မ(၃၇၉)ဖြင့် ကျိုက်ထော်မြို့မရဲစခန်းက အမှုစစ် ရဲအုပ် မျိုးဇော်ထွန်းက ယင်း အမှုအား တာဝန်ယူစစ် ဆေးနေကြောင်း သိရှိရပါသည်။
မူးယစ်ဆေးဝါး လက်ဝယ်တွေ့ရှိမှု၊ သုံးစွဲမှုတို့ဖြင့် တရားစွဲဆိုခံထားရသူ သရုပ်ဆောင်ရဲတိုက်ကို ထောင်၆နှစ်ချ
မူးယစ်ဆေးဝါး လက်ဝယ်တွေ့ရှိမှု၊ သုံးစွဲမှုတို့ဖြင့် လွန်ခဲ့သည့်နှစ်က တရားစွဲဆိုခံထားရ
သူသရုပ်ဆောင်ရဲတိုက်ကို ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး၊
၂၀၁၃ခုနှစ်ဇူလိုင်လ ကစပြီး ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသူသရုပ်ဆောင် ရဲတိုက်ကို ပုဒ်မ ၁၅။ ၁၆ (ဂ)ဖြင့် ရဲမှ
သင်္ကြန်တွင်းမှာ ပျော်စရာကိုသာရှာသူတွေ ဒုက္ခပင်လယ်ဝေရတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကို သူမသိပေမဲ့ တကယ်ရှိပါတယ်။ ခေတ်ပြောင်းလာလို့ ဝတ်စားဆင်ယင်တာတွေ ခေတ်ဆန်းလာသလို အကြံသမားတွအတွက်လဲ အကြံသစ်တွေ၊ လက်နက်သစ်တွေ တပ်ဆင်ထားနိုင်ကြပါတယ်။ အန္တရာယ်အသစ်ကို ကာကွယ်နည်းသစ်နဲ့သာ ကာကွယ်နိုင်ကြမှသာ နှစ်သစ်မှာ လူဖြစ်မရှုံးသူ ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
1. သောက်စရာမှန်သမျှ ရေကအစ ဆင်ခြင်ကြပါ။ သောက်စရာ ဘယ်ကနေလာသလဲ သိနေအောင်လုပ်ပါ။ ပုလင်း၊ ဗူး၊ ခွက်ကအစ ကိုယ့်ပါးစပ်ထဲရောက်တဲ့အတိ မျက်ခြေမပြတ်ပါစေနဲ့။ အများစုဝေးသောက်သုံးစရာထဲကဆို ပိုသတိကြီးကြပါ။
2. မျက်စိအောက်က ခဏလေးပျောက်သွားတဲ့ ကိုယ့်ခွက်ကို ပြန်မသောက်တော့ပါနဲ့။ ခွက်ကို တခုခုနဲ့ ဖုံးပေးထားပါ။ တနေရာမှ ချထားပြီးသားကို ပြန်မသောက်ပါနဲ့။
3. အဖေါ်ကနေ ကိုယ့်အတွက် ဆိုင်ကနေမှာသောက်တာဆိုလဲ ဈေးရောင်းတဲ့သူတိုင်းကို မယုံပါနဲ့။ ဈေးရောင်းသူနဲ့ ကိုယ့်အဖေါ် ဆက်ဆံရေးကိုလဲ အကဲခတ်တတ်ပါ။ မျက်စပြစ်ပြတာ၊ လက်ကုပ်တာ စတာမျိုးလဲ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်တတ်ပါစေ။
4. သောက်စရာထဲမှာ ဆေးရည်၊ အစက်ချဆေး၊ ဆေးမှုံတွေဟာ အနံ့၊ အရောင်၊ အရသာ မသိနိုင်တာများတယ်။ ကိုယ့်ရှေ့မှာ ဖေါက်ပေးတာကိုသာ သောက်ပါ။ ဒါလဲ ကြိုတင်ပြီး ဆေးထိုးအပ်နဲ့ မူးယစ်ဆေး၊ လိင်စိတ်ကြွဆေး ထည့်ထားတာမျိုးလဲ ရှိနိုင်တယ်။ ရောသောက်ရတာမှာ ရောတာတိုင်းကို သတိထားရမယ်။
5. တခုခုသောက်ပြီး မူးဝေလာသလို၊ အိပ်ချင်လာသလို၊ စိတ်မူပြောင်းလာသလို တခုခုထူးတာနဲ့ ဆေးအကူအညီ တောင်းဘို့ ချက်ချင်းလုပ်ပါ။ မသိသူတွေကနေ ကူမယ်ပြောတိုင်းလဲ မယုံပါနဲ့။ ရဲကိုအကူအညီယူပါ။ ကြက်ခြေနီ အကူအညီယူပါ။
6. ကိုယ့်ဖုန်းနံပါတ်၊ အိမ်လိပ်စာ၊ ဖေ့စ်ဘွတ် အိုင်ဒီ သူများကို မပေးပါနဲ့။ ကိုယ်တယောက်ထဲရှိနေတုံးမှာ အနားကပ်လာသူတိုင်းကို မယုံပါနဲ့။
7. ကိုယ့်ကို လိင်ပ်ိုင်းဆိုင်ရာ အပြုမူတမျိုးမျိုး အချိန်မရွေး လာလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကို ခေါင်းထဲမှာထားပါ။ လက်ကို ကိုင်တွယ်တာကအစဖြစ်တယ်။ ခေါင်းညိတ်တာကို မလွယ်ပါစေနဲ့။
8. ရင်းနှီးတဲ့သူငယ်ချင်း၊ သမီးရည်းစား၊ ယူဘို့စိတ်ကူးထားသူ ဘယ်သူ့ကိုမဆို စည်းကမ်းသုံးတန်နဲ့ တားထားပါ။ စည်းကျော်လာတာနဲ့ တွန်းလှန်ဘို့ သတ္တိရှိပါ။
9. ကိုယ်ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတာ အနည်းဆုံး တယောက်ယောက်ကို အသိပေးထားခဲ့ပါ။ နေရာပြောင်းတိုင်းလဲ အကြောင်းကြားပါ။ မိန်းကလေးဖေါ်ပါရင် သူဘယ်မှာ၊ ကိုယ်ဘယ်မှာဆို အဆက်အသွယ်အမြဲမပြတ်ရှိနေပါ။
10. လက်ကိုကိုင်တာ၊ ပါးကိုနမ်းရှုံတာလေးနဲ့ ဘာမှမဖြစ်ဘူး မထင်ပါနဲ့။ အစပျိုးမှုကလေးကနေ ဘဝဆိုးအထိ ဆက်နိုင်ဘို့ လမ်းဖွင့်ပေးတာနဲ့ တူပါမယ်။
11. အိမ်ပြန်ပို့ပေးမယ်ဆိုသူ၊ ဟိုနားသွားရအောင်ခေါ်သူ၊ စားရသောက်ရအောင် ဖိတ်သူတွေဟာ အကြံနဲ့ဆိုတာ အမြဲသံသယရှိထားပါ။
12. နေရတာ စိတ်လုံခြုံမှု နည်းတယ်ထင်တဲ့နေရာမှာ ဆက်မနေပါနဲ့။ စိတ်ချရတဲ့နည်းနဲ့ စိတ်ချရတဲ့နေရာကို ပြောင်းပါ။
13. ကိုယ့်ကိုခြိမ်းခြောက်မှုရှိထာကို ငြိမ်မနေပါနဲ့။ တခြားလူတွေကို သိစေအောင် ဆူညံမှုတခုလုပ်ပါ။ နံရံကို ခြေနဲ့ကန်တာ၊ တခုခုအသံဆူအောင်လွှတ်ချတာ၊ အော်ဟစ်တာ စသည်။ အဲလိုအခြေအနေမျိုးများ သိပ်သဘောကောင်းသူ၊ သီးခံတတ်သူလို့ ကိုယ့်ကိုအထင်မခံချင်ပါနဲ့ လူကြမ်း၊ စိတ်ကြမ်းသူလို တမင်တကာပြုမူပါ။ ကိုယ့်ကိုအထင်သေးသွားပါစေ။ အနားကလူတိုင်းဟာ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဘက် ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါ။
14. အပြောကောင်းသူ၊ မြူဆွယ်သူတွေကို လူကဲခတ်တတ်ပါစေ။ အပြောတမျိုး အလုပ်တမျိုးလာနိုင်တာလဲ သတိထားပါ။ ရွယ်တူတွေက ဆွဲဆောင်တိုင်း၊ မဟုတ်မထင်ပါနဲ့။ လိင်မှုကိစ္စသာမကပါ၊ ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ဘို့ အဖေါ်စပ်ရာမှာလဲ မပါမိစေနဲ့။ ခိုးမှု၊ တိုက်မှုသာ မဟုတ်ပါ။ ဆေးပြားရောင်းတာ၊ လက်ဆင့်ကမ်းပေးတာမှာလဲ ကြံရာပါမဖြစ်ပါစေနဲ့။
15. ကိုယ်ဝတ်ဆင်တဲ့အဝတ်အစား၊ ကိုယ်နဲ့တွဲသွားသူ၊ ကိုယ်သွားရာနေရာတွေဟာ ရန်သူကို ဖိတ်ခေါ်နေတာမျိုး ဖြစ်နိုင်တယ်။
16. သူများ အကျဉ်းအကြပ်နဲ့ ဒုက္ခရောက်နေရင်လဲ ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ဖြစ် အကြောင်းကြားပေးတာ၊ အကူအညီ ခေါ်ပေးတာမျိုးနဲ့ ကူညီပါ။
17. မသင်ကာတာနဲ့ ဆက်သွယ်ရမဲ့ ဖုန်းကို အဆင်သင့်ကိုယ့်ဖုန်းမှာ အလွယ်နှိပ်နိုင်အောင် အဆင်သင့်လုပ်ထားပါ။ ရောက်နေတဲ့အရပ်က ရဲစခန်းစတာမျိုးကို သိထားပါ။
18. ကိုယ်မြင်တာ သိတာကို ရဲကနေမေးရင် ထုတ်ဖေါ်ပြောဘို့ ဝန်မလေးပါနဲ့။ ဥပဒေအကာအကွယ်ရှိတာကိုလဲ အသုံးချပါ။
19. သတိလစ်စေရန် ပြုလုပ်နိုင်သည့်ဆေးဝါးများဆိုတာ ခံလိုက်ရပြီးရင် ဘယ်နေရာမှာ ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ပြန်မပြောနိုင်တဲ့ မေ့ဆေးအစွမ်းရှိတယ်။ ညစ်ညမ်းဆေးဝါးတွေဟာ နည်းနည်းထည့်တာသောက်မိတာနဲ့ လိင်ပိုင်းမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မထိန်းနိုင်တဲ့ ဘဝမျိုး ရောက်သွားတယ်။ ညစ်ညမ်းလက်ဖက်ရည်၊ လေဒီကော်ဖီတွေကလဲ အတူတူဘဲ။
20. ပြုကျင့်မဲ့သူကနေ အရင်ကတည်းက အရိပ်အကဲခတ်ထားပြီးဖြစ်နိုင်တယ်။ သင်္ကြန်မတိုင်ခင်ကည်းက နောက်ယောင်ခံနေတာလဲရှိနိုင်တယ်။
ကိုယ့်လက်ကိုဖြတ်ပြီး သားကိုလည်းသတ်ခဲ့သူနဲ့ မိတ်ဆွေတွေဖြစ်လာ
Tutsi Alice Mukarurindaအမည်ရှိ ရ၀န်ဒါနိုင်ငံသူတစ်ယောက်ဟာ ၁၉၉၄ခုနှစ်တုန်းက သူမရဲ့ညာဘက်လက်ဖြတ်ခံရပြီး သူမရဲ့ ကလေးလည်း အသက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ရက်စက်ခဲ့သူကတော့ Emmanuel Ndayisaba ဆိုသူပါပဲ။
ဒီကနေ့ ဧပြီလ ၇ရက်နေ့ဟာ အတိတ်ကသွေးစွန်းခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ရဲ့ အကြိမ်၂၀မြောက် နှစ်ပတ်လည်နေ့အဖြစ် Tutsi Alice Mukarurindaက မှတ်ခဲ့ပါတယ်။
Tutsi Alice Mukarurindaက ဘဏ္ဍာထိန်းဖြစ်နေပြီး၊ Emmanuel Ndayisabaကတော့ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုမှာ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သူတွေအတွက် အုတ်အိမ်တည်ဆောက်ရေး ဒုဦးစီးမှူးဖြစ်နေပါတယ်။
ဟူတူလူမျိုးဖြစ်တဲ့ Emmanuel Ndayisabaဟာ ၁၉၉၆ခုနှစ်မှာ ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ ပြစ်မှုတွေကို နောင်တရခဲ့ပြီး သူ့ကိုယ်သူပြောင်းလဲခဲ့ပါပြီ။ ဟူတူလူမျိုးတွေရဲ့ ပစ်မှုကို ၂၀၀၃ခုနှစ်မှာကျေအေးပေးခဲ့တဲ့အတွက် ၁၉၉၇ခုနှစ်ကနေ ၂၀၀၃ခုနှစ်ထိ ထောင်ထဲမှာ နေခဲ့ကြရပါတယ်။
Emmanuel နဲ့ Alice တို့ဟာ ခုအခါမှာ အိမ်နီးချင်းတွေဖြစ်နေပြီး တစ်ဈေးထဲမှာ ဈေးဝယ်နေကြပါပြီ။ Emmanuel ဟာ Alice ရှေ့မှောက်ဒူးထောက်ပြီး သူ့ကိုခွင့်လွှတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ Alice ဟာ နှစ်ပတ်လောက် စဉ်းစားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ခွင့်လွှတ်ပါတယ် လို့ ပြောခဲ့ပါတော့တယ်။
ဧပြီ ၃ ရက်၊ နံနက် ၀၃း၃၀ နာရီအချိန်ခန့်က မှော်ဘီမြို့နယ် သစ်တောဦးစီးဌာနမှ တောအုပ် ဦးသက်နိုင်ဦး၊ တောခေါင်း ဦး ထွန်းဝင်း၊ တောခေါင်းဦးသန်းဝင်း ဇော်တို့က တရားမ၀င်သစ်များ တင်ဆောင်လာသည်ဟုယူဆရ သော ယာဉ် ၃ စီးမောင်းနှင်သွား ကြောင်း၊ ၎င်းတို့အဖွဲ့ကလည်း အဆိုပါယာဉ် ၃ စီးနောက်မှလိုက် ပါလာကြောင်း၊ တောအုပ်ဦးဝေ မျိုးလွင်နှင့်အဖွဲ့၊ မှော်ဘီအမှတ် ၄ လမ်းဆုံသစ်နှင့် သစ်တောထွက် ပစ္စည်းစစ်ဆေးရေးစခန်းတွင် တာ ၀န်ထမ်းဆောင်နေသော တော အုပ် ဦးစောသန်းထွန်းနှင့်အဖွဲ့သို့ တပ်လီဖုန်းဖြင့်သတင်းပေးပို့ခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
မှော်ဘီသစ်တောဦးစီးအရာရှိ ရုံးမှ တောအုပ်ဦးဝေမျိုးလွင်နှင့် အဖွဲ့က မှော်ဘီမြို့မဈေးရှေ့တွင် ကင်းပုန်းဝပ်စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ ကြောင်း၊ မှော်ဘီအမှတ် ၄လမ်း ဆုံတွင် တောအုပ်ကြီးဦးစောသန်း ထွန်းအဖွဲ့နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ရန်ကုန်ပြည်ကားလမ်းပေါ်တွင် ဘယ်ရီဂိတ်(၇)ခုဖြင့် ပိတ်ဆို့ထား ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ဧပြီ ၃ ရက်၊ နံနက် ၄ နာရီ အချိန်ခန့်တွင် မီးပြ၍ရပ်တန့်ပေး ရန် တားဆီးစဉ် ရှေ့ဆုံးမှမောင်း နှင်လာသော ယာဉ်အမှတ် ၃ခ/ ၁၈၉၅TOYOTA COROLLA Saloon နက်ပြာရောင်ယာဉ်သည် ဂိတ်ရှောင်လမ်းဘက်မှကွေ့ဝိုက် မောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားပြီး၊ ၎င်း ယာဉ်နောက်မှလိုက်လာသော ယာဉ်အမှတ် ရှေ့အက္ခရာမမှတ်မိ /၄၇၄၄ Mester MPV အဖြူ ရောင်ယာဉ်သည် တားဆီးထား သော ဘယ်ရီများကိုတိုက်ပြီး မောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့သည်။ ၎င်းယာဉ်နောက်မှလိုက်လာသော ယာဉ်အမှတ်ရှေ့အက္ခရာမမှတ်မိ /၁၇၈၉ NISSAN SERENA အဖြူရောင်ယာဉ်သည် လမ်း၏ ညာဘက်ခြမ်းပလက်ဖောင်းဘေးမှ ရပ်တန့်ရန်တားဆီးနေသော တောခေါင်း ဦးဇော်နိုင်ကို ၀င်တိုက် ပြီး မောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့ သည်။ တောခေါင်းဦးဇော်နိုင်မှာ နဖူး၊ နှာခေါင်း၊ နှုတ်ခမ်းများကွဲပြီး လက်နှင့်ခြေထောက်တွင်ပွန်းပဲ့ ဒဏ်ရာများရရှိသွားသဖြင့် ရန်ကုန် ဆေးရုံကြီးသို့ပို့ဆောင်ပြီး ဆေး ကုသခံယူနေရကြောင်း သိရ သည်။
ထိုနေ့ နံနက် ၀၇း၃၀ နာရီ တွင် မှော်ဘီအမှတ် (၄)လမ်းဆုံ သစ်နှင့် သစ်တောထွက်ပစ္စည်း စစ်ဆေးရေးစခန်းမှတောခေါင်း ဦးသန်းဇော်ဦးက ၎င်းတို့မှတားဆီး စဉ် ဂိတ်ရှောင်လမ်းဘက်မှကွေ့ ၀ိုက်မောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားသော ယာဉ်အမှတ် ၃ခ/၁၈၉၅ သည် တိုက်ကြီးဘက်သို့ပြန်လည်မောင်း နှင်သွားကြောင်း တောအုပ် ဦး သက်နိုင်ဦးနှင့် အဖွဲ့ကို ဖုန်းဆက် သတင်းပို့သဖြင့် ရန်ကုန်ပြည်ကား လမ်း မိုင်တိုင်အမှတ် ၆၃/၀မိုင်မှ ကင်းပုန်းဝပ်စောင့်ဆိုင်းစဉ် ၎င်းင်း ကားက အုပ်္ပုံကျေးရွာအတွင်း မောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားသဖြင့် ပိတ်ဆို့ဖမ်းဆီးရာ ယာဉ်မောင်း ဦးရန်မျိုးအောင်(ဘ)ဦးစိုးပိုင်၊ အုပ္ပုံကျေးရွာ၊ တိုက်ကြီးမြို့နယ်၊ ယာဉ်ပေါ်ပါသူ ဦးပြည့်ဖြိုးအောင် (ဘ)ဦးဟုတ်ကြည် သန္ဓေပင်၊ တိုး ဂိတ်အနီး၊ မှော်ဘီမြို့တို့ကိုဖမ်းဆီး မိ၍ ရှာဖွေရာ နောက်ထိုင်ခုံများ ဖြုတ်ထားပြီး ကျွန်းသစ်အမှုန့်များ ကို တွေ့ရှိသဖြင့် တရားမ၀င် ကျွန်းသစ်များတင်ဆောင်ထားခဲ့ ကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရသည်ဟု ဆိုသည်။
ယာဉ်မောင်းဦးရန်မျိုးအောင် နှင့် ယာဉ်ပေါ်ပါသူဦးပြည့်ဖြိုး အောင်တို့ကို တိုက်ကြီးမြို့နယ်၊ သစ်တောဦးစီးဌာနမှ စစ်ဆေးရာ ဧပြီ ၃ ရက်၊ နံနက် ၄ နာရီ အမှတ်(၄)လမ်းဆုံစစ်ဆေးရေး ဂိတ်၌ ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သော ယာဉ်တွင် ၎င်းတို့ ရှေ့နောက် မောင်းနှင်လာသော ယာဉ် ၃ စီးမှ အဆိုပါ ယာဉ်ပါဝင်ကြောင်း၊ တောခေါင်း ဦးဇော်နိုင်ကို တိုက် သွားသောယာဉ် ယာဉ်မောင်းမှာ မှော်ဘီမြို့၊ အမှတ်(၄) လမ်းမကြီး ဘေးတွင် နေထိုင်သော ဦးရန်နိုင် ၏ညီ ဦးဝင်းထွဋ်ဖြစ်ကြောင်း စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့သည် ဆို၏။
ဧပြီ ၃ ရက် နံနက် ၁၀း၃၀ နာရီတွင် မှော်ဘီမြို့နယ်၊ မြို့ ရှောင်လမ်း၊ အနောက်ရပ်ကွက်၊ အောင်ရတနာလမ်း၊ ဘွက်ကြီး ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရဲစုကျေးရွာအနီး တွင် ယာဉ်၏နံပါတ်ပြားကို ဖြုတ် ထားသော ယာဉ်တစ်စီးကိုတံခါး များပိတ်၍ ရပ်တန့်ထားကြောင်း သတင်းရ၍ အမှတ်(၄)လမ်းဆုံ သစ်နှင့် သစ်တောထွက်ပစ္စည်း စစ်ဆေးရေးစခန်းမှ တောခေါင်း ဦးရီသန်း၊ တောခေါင်း ဦးသန်း ဇော်ဦးနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ကားတံခါးသော့များကိုဖျက်၍ စစ်ဆေးရာ ယာဉ်ပေါ်တွင် ကျွန်း တံခါးအပိုင်းအစများတွေ့ရှိ၍ စစ်ဆေးရာ ကျွန်းတံခါးအပိုင်း အစ ၇၁၇ ချောင်း၊ (၀.၆၄၈၄) တန်ကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။
ထို့ပြင် အဆိုပါယာဉ်မှာ ဘောနက်ဖုံးပိန်နေခြင်း၊ ရှေ့ညာ ဘက်မီးလုံးပြုတ်နေခြင်း၊ ရှေ့လေ ကာမှန်မှာကွဲအက်နေခြင်း၊ ဆံပင် မွှေးများကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်ဟု သိရ သည်။ ယာဉ်ပေါ်မှထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်သွားသူယာဉ်မောင်း နှင့် ယာဉ်ပိုင်ရှင်၊ တရားမ၀င်ကျွန်း တံခါးအပိုင်းအစ ၇၁၇ ချောင်း၊ (၀.၆၄၈၄)တန်ပိုင်ရှင်တို့ကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်၍ သစ်တောဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၃(က)ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ယာဉ်တိုက်မှုအရလည်းကောင်း အရေးယူနိုင်ရန်ကြိုးစားဆောင် ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိ သည်။
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းရပ်ရန် မြစ်ဆုံအထိ လမ်းလျှောက်သူအချို့ လမ်းမလျှောက်နိုင်၍ ကားစီး
မြစ်ဆုံရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း အပြီးသတ်ရပ်ဆိုင်းရန် လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြစဉ် လမ်းမလျှောက်နိုင်၍ ကားစီးသူများအား တွေ့ရစဉ်
မြစ်ဆုံစီမံကိန်း အပြီးတိုင်ရပ်တန့်ရေး မြစ်ဆုံအထိ လမ်းလျှောက်ဆန္ဒဖော်ထုတ်သည့်အဖွဲ့မှ သက်ကြီးရွယ် အိုအချို့ မော်တော်ယာဉ် အကူအညီဖြင့် လိုက်ပါနေရသည်ဟု ခရီးစဉ်တွင်ပါဝင်သည့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်း သားဟောင်းများအဖွဲ့ချုပ်မှ ဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင် ဦးမြင့်ဝင်းမောင်က ဧပြီ ၆ ရက်တွင် မဇ္ဈိမ ကို ပြောသည်။
“သက်ကြီးရွယ်အိုတွေပေါ့ဗျာ။အသက် ၅၀ ကျော်၊ ၆၀ ကျော် အရွယ်တွေကတော့ ကားစီးတာ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အချိန်ပြည့် တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ နာရီအပိုင်းအခြားနဲ့ လည်း မဟုတ်ဘူး။ သူတို့ကလည်း အမြဲ တမ်းကြီး ကားပေါ်မှာနေနေတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ကလည်း မြစ်ဆုံထိ လမ်းလျှောက်မှာ ဆိုတော့ သူတို့ကို မစီးနဲ့လို့လည်း မပြောရက်ဘူး”ဟု ဦးမြင့်ဝင်းမောင်က ပြောသည်။
ခရီးစဉ်တွင် အဖွဲ့နှင့်အတူ အ၀တ်အထည်အသုံးဆောင် တင်ဆောင်ရန် Toyota Lite Ace တစ်စီးနှင့် ဆေးဝါးပစ္စည်းသယ်ယူသည့် Suzuki R+ တစ်စီး ပါဝင်သည်။ အဆိုပါ မော်တော်ယာဉ်များ ဖြင့်သာ အဖွဲ့ဝင် သက်ကြီးရွယ်အိုအချို့ လိုက်ပါ စီးနင်းနေခြင်းဖြစ်သည်ဟု ၎င်းင်းက ရှင်းပြသည်။
မတ် ၂၃ ရက်တွင် ရန်ကုန်မှ လူအင် အား ၁၀၀ ခန့်ဖြင့် စတင်ထွက်ခွာလာသည့် လမ်းလျှောက်အဖွဲ့သည် ဧပြီ ၆ ရက်မကွေး မြို့သို့ ရောက်ချိန်တွင် အင်အား ၁၆၀ နီးပါးရှိနေပြီဟု လိုက်ပါသူများက ဆိုသည်။ ယနေ့အထိ လမ်းခရီးတစ်လျှောက် ကျန်းမာရေး၊ စားဝတ်နေရေး အပါအ၀င် မည်သည့် အနှောင့်အယှက် တစ်စုံတစ်ရာမျှ ကြုံတွေ့ ရခြင်းမရှိသေးဟု ပြောကြသည်။
အဆိုပါအဖွဲ့သည် ဧပြီ ၈ ရက် ရေနံချောင်းသို့ မထွက်ခွာမီ မကွေးမြို့တွင် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများ ခံယူရန် စီစဉ် ထားကြသည်။ ခန့်မှန်းရက် ၁၀၀ ဖြင့် မြစ်ဆုံသို့အရောက်သွားရန် မျှော်မှန်းထားသည့် အဆိုပါအဖွဲ့သည် စတင်ထွက်ခွာပြီး ၁၅ ရက်အကြာတွင် မကွေးမြို့သို့ ရောက်ရှိ ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
မျောက်များ၏ ဗက္လာယ ပြုမူမှုကြောင့် ကမ္ဘာကျော်တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သူ
မျောက်များကြောင့် အင်တာနက်တွင် ကမ္ဘာကျော်တစ်ဦး ဖြစ်လာသူ ထိုင်ဝမ် မော်ဒယ်လ်က သူမသည် ထိုသို့ဖြစ်လာရန် မမျှော်လင့်ခဲ့ကြောင်း ဖွင့်ဟဝန်ခံခဲ့သည်။ အသက်(၂၂)နှစ်သာ ရှိသေးပြီး လက်ရှိတွင်
ကျောင်းတက်နေဆဲဖြစ်သော ချာမီယန်ချန်းသည် အမြီးရှည်ရှည်နှင့် မကာကွီ မျောက်လေးများကို အစာကျွေးရာမှ လက်ဆော့တတ်သည့် တိရစ္ဆာန်လေးများကြောင့် ဒုက္ခများခဲ့သည်။
အဆိုပါ မျောက်များသည် သူမ၏ အင်္ကျီကို ဆွဲချွတ်ရန် ကြိုးစားရာ
ချန်းခမျာ အသည်းအသန် ကာကွယ်နေရပြီး အဆိုပါမြင်ကွင်းကို ဓာတ်ပုံရိုက်ထားခဲ့သည်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဘာလီမြို့သို့ သွားရောက်လည်ပတ်စဉ် ရိုက်ကူးထားသော အဆိုပါ ဓာတ်ပုံကို ပြန်ကြည့်စဉ်က ချန်းသည် ရယ်ရွှင်စရာ အဖြစ်သာ သဘောထားခဲ့သည်။
သို့သော်လည်း ထိုပုံသည် အင်တာနက်မှတစ်ဆင့် အာရှတိုက်တစ်ဝှမ်းကို ကျော်လွန်ကာ အမေရိကန်၊ ဥရောပနှင့် ဗြိတိန်တို့ထိ ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ ချန်းတစ်ယောက် ထိုင်ဝမ်သို့ ပြန်ရောက်ချိန်တွင် ယင်းကိစ္စကို သိရှိပြီးနောက် မျက်လုံးပြူးခဲ့ရသည်။ “တော်တော် ထူးဆန်းတယ်။ ကျွန်မ ပြန်ရောက်တော့ Facebookထဲမှာ ကျွန်မကို Friendအဖြစ် လာAddထားတဲ့လူတွေ မနည်းဘူး။ နောက်ပြီးတော့ ရုပ်မြင်သံကြား ဌာနတွေ
ကလည်း ကျွန်မကို ဖုန်းဆက်ကြတယ်။ ဒုက္ခပါလားနော်။ ကျွန်မ ဘာလီကို အလည်သွားတာက ကျွန်မဘဝကို ဒီလောက် ပြောင်းလဲသွားစေမယ်လို့ မထင်မိဘူး။ ကျွန်မက လောလောဆယ် ပညာသင်
နေတုန်းပါ။ ကျွန်မရဲ့ မလုံမလဲဖြစ်သွားတဲ့ ဓာတ်ပုံကြောင့် ဒီလောက်ကြီး နာမည်ကြီးသွားတာတော့ မကြိုက်ဘူး”ဟု ချန်းက ညည်းညူပြောဆိုသွားခဲ့သည်။
မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကုမ္ပဏီ အများပြည်သူကို ရှယ်ယာ ထုတ်ရောင်း
မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အများနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ကုမ္ပဏီဟာ နဂိုက ရုပ်ရှင်လောက သားတွေကိုပဲ ရောင်းချပေးခဲ့တဲ့ အစုရှယ်ယာတွေကို ဧပြီ ၁ ရက်နေ့က စပြီး အများပြည်သူကို ထုတ်ရောင်းပေးနေပြီးလို့ ရုံးအဖွဲ့ရဲ့ တာဝန်ရှိသူတယောက်က ဒီဗွီဘီကို ပြောပါတယ်။
Film Associationပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လဆန်းက အများပိုင်ကုမ္ပဏီဟာ ရုပ်ရှင်လောကသားတွေကို ၁ စု ကျပ် ၁ သောင်းတန် အစုပေါင်း ၁ သိန်းခွဲ ရောင်းချခဲ့ရာမှာ အများစု ရောင်းချပြီးခဲ့ပြီလို့ သိရပါတယ်။
အခု လက်ကျန် အစုရှယ်ယာ ၅ ထောင်ကျော် အများပြည်သူတွေကို ရောင်းချပေးတာ ဖြစ်ပြီး ရောင်းကုန်တယ်ဆိုရင် နောက်ထပ် အစုရှယ်ယာ ထုတ်ရောင်းဦးမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီ ရလာတဲ့ငွေတွေကို ရင်းနှီးမတည်ပြီး လှိုင်သာယာ စက်မှုဇုန် ၂ မှာ စင်ကာပူက မှာယူထားတဲ့ ဒီဗွီဒီအခွေထုတ် စက်ရုံကြီး ၁ ခု တည်ဆောက်သွားမယ်လို့ ကုမ္ပဏီက ထုတ်ပြန် ကြေညာထားပါတယ်။
အခမဲ့ ရေသန့်ရယူ နိုင်တဲ့ နေရာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက် ကတော့ ရေသန့်ဗူးများ ဝယ်ယူ အသုံးပြုခြင်းကို လျော့ချစေချင်လို့ ဖြစ် ပါတယ်။ နော်ကတော့ လူတိုင်း နီးပါး ရေသန့်ဗူး မဝယ်တော့ပဲ ကိုယ်တိုင် ရှိရင်းစွဲ ရေဗူးအလွတ်ကို သယ်ဆောင်တဲ့ အလေ့အကျင့် ရရှိ လာပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ မြို့မှာ ရေသန့်ဗူး ရောင်းချခြင်းကိုပါ တရားင် ပိတ်ပင် တားမြစ် လိုက်ပါတယ်။
ရေသန့်ဗူး များ တစ်ဗူးပြီး တစ်ဗူး ဝယ်ယူ အသုံပြုခြင်းက စွန့်ပစ် ပစ္စည်း အပို ပိုမို ထွက်ရှိစေတာ ကြောင့်မို့လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ယင်း အစီအစဉ်ကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့ တစ်ခုက စတင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး အောင်မြင်ခဲ့ ပါတယ်။ နောက်ဆိုရင် အမေရိကန်ရဲ့ အခြားသော မြို့ ပေါင်း များစွာကိုပါ လုပ်ဆောင် သွားစေမှာ ဖြစ်ကြောင်း သိရ ပါတယ်။
အသက်ကြီးပြီဖြစ်သော အဘိုးဟာ ကင်ဆာဝေဒနာကို ပြင်းထန်စွာ
ခံစားနေရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူဟာ ဆရာဝန်နှင့် ပြသခဲ့ရာ နောက်ထပ် ၆ လ အကြာတွင် သေဆုံးတော့မယ်ဟု ဆရာဝန်က ဆိုပါတယ်။
အဘိုးဟာ အဲဒီနေ့မှစ၍ လမ်းလျောက်ခြင်း လေ့ကျင့်ခန်းကို စပြီးလုပ်ခဲ့ရာ ၆ လကြာပြီးနောက် ဆရာဝန်ဆီ သွားပြခဲ့ပါတယ်။ ထိုအခါ ဆရာဝန်က နောက်ထပ် ၁၀ နှစ်ကြာ နေနိုင်သေးတယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
ထိုအဘိုးဟာ အသက် ၁၀၂ အရွယ်မှာ ဆုံးသွား ခဲ့ပါတယ်။ ကင်ဆာရောဂါ ခံစားရသော်လည်း လမ်းလျောက်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းကြောင့် အသက် ၁၀ နှစ်ပိုရှည်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုရမှာပေါ့။